कता जाँदैछ विद्यार्थीको भविष्य ?
२०७६ माघ १५ बुधबार २०:४३:००
अनुशासन र नैतिकता विद्यार्थीको गहना हो । शिक्षा प्राप्त गरि आफ्नो ज्ञान सिप र व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन अग्रसर व्यक्तिलाई विद्यार्थी भनिन्छ । प्राचिन कालदेखि वर्तमान अवस्थासम्म आइपुग्दा विद्यार्थीको परिभाषा फरकफरक भए पनि अर्थमा तात्विक भिन्नता देखिंदैन । तर अहिलेको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा विद्यार्थीको भविष्य अन्योलतातर्फ अघि बढ्दै गएको आभाष हुन थालेको छ ।
देश विकासको प्रमुख खम्बा शिक्षा नै हो । तर, विद्यार्थीलाई दिइएको स्वतन्त्रताले उनीहरुको भविष्यलाई सकारात्मक बाटोतर्फ उन्मुख गराएको छ त ?
प्राचिन समयमा विद्यार्थीलाई पाप र पुण्यको आधारमा कडा अनुशासनमा राखेर अध्यापन गराइन्थ्यो । बीचको समयमा दण्डलाई प्रयोग गरेर विद्यार्थीलाई अध्यापन गराइन्थ्यो । जसले उनीहरुको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित पक्कै पार्यो र केही निर्दोष विद्यार्थी पनि सजायँको भागिदार बन्न पुगे । यी र यस्ता क्रियाकलाप गलत भएको महसुस सर्वत्र भएर नै होला उनीहरुमा स्वतन्त्रतापूर्वक सिकाई हुनुपर्ने माग बढ्न थाल्यो र सो कुरालाई शैक्षिक जगतले आत्मसात गरी अगाडि बढायो पनि ।
अहिलेको सिकाइ क्रियाकलापले विद्यार्थीको भविष्यलाई उज्यालोतर्फ उन्मुख गराएको छ त ? यो प्रश्नको जवाफबाट मात्रै विद्यार्थीको भविष्य केही अन्दाज गर्न सकिएला कि ?
खुला र स्वतन्त्रताबाट मात्रै विद्यार्थीको भविष्य उज्ज्वल बाटोमा अगाडि बढाउने प्रयासले विद्यार्थीको भविष्य अझै अन्धकारतर्फ उन्मुख भएको पनि देखिन्छ । बालबालिकाको दोस्रो परिवार, विद्यालय हो । परिवारमा नै उसले धेरै संस्कार र गतिविधि सिकेर मात्रै दोस्रो परिवारको रुपमा विद्यालय प्रवेश गर्दछ ।
सन्तानलाई बढि माया र ममताले बिगारेका पनि धेरै उदाहरण छन् । सन्तानलाई सुख दिने चाहनामा अभिभावकले ठूलो भूल गरेको पनि पाइन्छ । बालकालिकाको दोस्रो घर पाठशाला नै खराब शिक्षण संस्था बन्नु हुँदैन् । विद्यालय पनि नराम्रा र अशोभनीय समाचारको केन्द्रबिन्दु बनेका पनि छन् । जस्तै विद्यार्थी विद्यार्थीबीचको झगडा, शिक्षकमाथि अमानवीय ब्यवहार, कलिलै उमेरमा लागू औषधको प्रयोगजस्ता धेरै समाचार विद्यालयका बारेमा सुन्नमा आउँछ । विद्यार्थीले शिक्षा आर्जन गर्ने क्षेत्रको वातावरण त्यस्तो भएपछि विद्यार्थीको भविष्य कता जाला ? गम्भीर प्रश्न उत्पन्न हुन पुग्दछ ।
हरेक विद्यार्थीका राम्रा आवश्यकताहरु पूरा गर्नु पर्छ तर अनावश्यक चाहनालाई नियन्त्रण पनि गर्नु पर्छ । त्यसका लागि पहिलो पाठशाला परिवारबाटै सुरुवात हुनुपर्छ । परिवारको सहयोग नभए विद्यालयमा बालबालिकालाई सिकाईमा केन्द्रीत गराउन कठिन हुन्छ । आधुनिकताको नाममा बढि स्वतन्त्रता दिँदा अधिकांश विद्यार्थीले नराम्रो बाटो अँगालेको पनि भेटिएको छ ।
आधुनिकताको नाममा प्राचिन तथा पुराना शिक्षा पद्धतीहरुलाई बिर्सिदाँ केही शैक्षिक उपलब्धि देखिए पनि गुणात्मक रुपमा खास उपलब्धि भएको पाइँदैन् । यसो भन्दैमा आधुनिक शिक्षा पद्धतीलाई पूरै बेवस्था गर्ने भन्न खोजेको चाहिँ होइन् । नैतिकका विषयलाई कडाईका साथ प्रयोग गर्दै आधुनिकताको शिक्षण गर्न सकेमा विद्यार्थीको भविष्य सुन्दर हुनेछ ।
मुख्यतः वर्तमान समयमा बालबालिकाको भविष्य अन्योल बनाउने पक्षहरु यस्ता छन :–
बालबालिकाको अनावश्यक इच्छालाई पूर्ति गर्न खोज्नु,
बालबालिकाको मनोविज्ञानलाई नबुझि देखावटी समाजको विकास हुनु,
अभिभावकले बालबालिकालाई समय कम दिनु,
आफ्ना धर्म संस्कृति नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न नसक्नु,
विद्यालय तहमा लागू भएका पठ्यक्रमहरुमा नैतिक ज्ञानको सामाग्री कम समावेश हुनु,
अभिभावकले बालबालिकाका लागि फजुल खर्च गर्नु,
पश्चिमी सभ्यतालाई प्रतिष्ठाको रुपमा लिनु,
मातृ भाषा भन्दा अंग्रेजी भाषालाई मात्र जोड दिनु
पुरानो शिक्षा मात्रै ठिक र अहिलेको बेठिक हो भन्ने कदापी होइन् । यसलाई एक आपसमा सही तरिकाले व्यवस्थापन गरि आगामी दिनमा अगाडि बढ्न सकिन्छ ।
जे जस्तो भए पनि विगतका केही महत्वपूर्ण आचरण, व्यवहारलाई अहिले पनि आत्मसात गर्दै अघि बढ्दा उचित हुने देखिन्छ । पुराना र नयाँ दुवै पद्धतीलाई परिवेश अनुसार मिश्रण गरेर शिक्षण गराउन सके मात्रै विद्यार्थीको भविष्य सकारात्मक बाटोतर्फ उन्मुख हुन सक्दछ ।
(लेखक एसपिएम कलेज गैंडाकोट, नवलपुरमा शिक्षाशास्त्र संकाय प्रमुख छन्)
नेपाली विद्यार्थीको समस्या समाधान गर्न पहल
विदेशमा रहेका पाँच लाख विद्यार्थीलाई तत्काल फिर्ता नल्याउने सरकारको नीति